Best Air Brake Hose ထုတ်လုပ်သူနှင့်စက်ရုံ | Jinxing
1. ရေပိုက်ဖွဲ့စည်းပုံ: သုံးအလွှာ။ အတွင်းရာဘာအလွှာ + ကျစ်လစ်သောအလွှာ + အပြင်ဘက်ရော်ဘာအလွှာ
2. ပစ္စည်း: NBR / CR + အားဖြည့်အလွှာ (PET)
4. အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်: DOT / IATF16949: 2016 / CQC
5. စံ: SAE J1402 / GB16897
ထုတ်ကုန် AIR ဘရိတ် HOSE Package 50 မီတာ ~ 100 မီတာ / roll
လက်မှတ် DOT / IATF16949: 2016 / CQC စံ SAE J1402 / GB16897
ပစ္စည်း NBR / CR ထုတ်လုပ်မှု 20000M / နေ့
ရေပိုက်အရွယ်အစား 6MMX4MM; 8MMX15MM; 10MMX17MM; 10MMX19MM; 13MMX22MM
port တင်နေသည် Xingang ဆိပ်ကမ်း， Tianjin / Qingdao, Shandong / Ningbo port, Zhejiang / Shanghai
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ Hebei Jinxing Technology CO LTD သည်မော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့်မော်တော်ဆိုင်ကယ်အတွက်အမျိုးမျိုးသောဘရိတ်ပိုက်များဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းတွင်အထူးပြုသည်။ ထုတ်ကုန်များသည် SAE J1401၊ SAE J1402 ကဲ့သို့သောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိသည်။
အရည်အသွေးတစ်ခုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အရေးပါသည်။ ကုမ္ပဏီသည်အဆင့်မြင့်အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်းကိရိယာများနှင့်တင်းကျပ်သော QC စနစ်ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည် ISO9001 အရည်အသွေးလက်မှတ်၊ “ 3C” လက်မှတ်၊ DOT လက်မှတ်၊ ISO / TS16949 အရည်အသွေးလက်မှတ်ကိုကျော်လွန်ပြီးဖြစ်သည်။
JINXING ရော်ဘာရေပိုက်များသည်ပြည်တွင်းစျေးကွက်တွင်အလွန်လူကြိုက်များပြီးထုတ်ကုန်များ၏တည်ငြိမ်မှုနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏ဂုဏ်သတင်းကြောင့်မြောက်အမေရိက၊ တောင်အမေရိက၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ ဥရောပနှင့်အာရှရှိနိုင်ငံပေါင်း ၂၀ ကျော်သို့တင်ပို့ရောင်းချသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည်ပေကျင်းလေဆိပ်နှင့် Tianjin Xin′Gang ဆိပ်ကမ်းနှင့်အလွန်နီးကပ်သော Hebei ပြည်နယ် Jizhou City တွင်တည်ရှိပြီးကုန်ပစ္စည်းများတင်ပို့ရန်အဆင်ပြေပါသည်။
၆။ ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း： တစ်နေ့လျှင် ၁၅၀၀၀ မီတာ
ရေပိုက်အရွယ်အစား: 6MMX4MM; 8MMX15MM; 10MMX17MM; 10MMX19MM; 13MMX22MM
ရော်ဘာပိုက်သည်မြင့်မားသောခိုင်ခံ့သောကျည်ဖိုင်ဘာဖြင့်အားဖြည့်ထားသည်။ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိခြင်း၊ ပြင်းထန်သောခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ ဆန့်နိုင်သည့်ဆန့်နိုင်မှုနှင့်သေးငယ်သော elongation တို့ကိုရရှိသည်။ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်မှု၊ အိုဇုန်းလွှာခံနိုင်မှု၊ အပူချိန်မြင့်မားခြင်းနှင့်အပူချိန်ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ ဘရိတ်သက်ရောက်မှုသည်လုံခြုံပြီးတည်ငြိမ်သည်
၎င်းကိုသာမန်အရွယ်အစားကြီး။ အလတ်စားကုန်တင်ကားများ၊ အကြီးစားနှင့်အလတ်စားဘတ်စ်ကားများ၊ ထရပ်ကားကြီးများ၊ လေးလံသောထရပ်ကားများ၊ ဘတ်စ်ကားများစသည်ဖြင့်အသုံးပြုသည်။
မျက်နှာပြင် - ပတ်ရစ်သောအထည်။
သက်ဆိုင်သောအပူချိန် - 40 ℃ ~ + 100 ℃
ရှေ့သို့ Braided ဘရိတ်ပိုက်
နောက်တွဲယာဉ် Air Brake Hose